HGH kurasikirwa muThailand | Shandisa vanhu kukura hormone kuti varasikirwa nemafuta
HGH kurasikirwa muThailand | Shandisa vanhu kukura hormone yekurasikirwa mafuta muBangkok
Growth hormone (somatotropin, HGH) vanhu vazhinji vari Tairendi Inobatanidzwa nehutano hwevatambi vekuvaka musimba. Nenzira iyo - HGH ine simba yakasimba yevanabolic, kukurudzira kukura kwemasimba, kusimbisa masimba ezvirwere uye kunyange kukonzera kuitika kwekugadziriswa kwekuzara. Nokuti mikana iyi kubva pakukwanisa kuderedza mafuta emuviri inowanzoshaikwa kuona, asi pasina-kukura hormone kupisa mapaundi akawedzerwa zvikuru.
Mukuenzanisira, unogona kutendeukira kuchikoro cheBangkok University mu1998, umo 24 vanhu vakuru vakagamuchira chirwere chezuva nezuva che 2 mg - 5 mg HGH kwemwedzi mitanhatu. Munguva iyi muviri wavo uwandu hauna kuderera, asi chiyero pakati pemisumbu uye chidimbu chinonzi adipose chakashandura zvinoshamisa - pamwero wega, mutori wega wega akawana 5.5 mapaundi emuviri uye, zvinokosha, akarasika 5.7 kg yemafuta. Uye kurasikirwa kukuru kwemafuta kwakaonekwa mudumbu. Hazvishamisi kuti nguva yekupedzisira yaiva madhiragi seGenotropin, jintropin uye ansomone nedzimwe mishonga yekukura kwemishonga inosarudzwa kune vatambi vakawanda vanotsvaka kuderedza kuwandisa kwemafuta emuviri.
Ko kukura kwehomoni kunorema kurasikirwa sei?
Chikamu chikuru chemafuta-kupisa nzvimbo yeHGH inosanganiswa nemigumisiro yaro pane metabolism. Metabolism, Zvinonyatsozivikanwa kuti inenge chero sero muviri wemunhu inoshandiswa nemafuta amafuta kana glucose. Uye kana huwandu hwehuga muropa hunotungamirirwa nevanabolic Insulin hormone, chiyero chemafuta acids mumukura wekukura. Chinangwa chaunoda kuwana kushama kwemairi uye kuderedza kwemafuta, ndiko kumanikidza masero kuti adye mafuta akawanda kupfuura glucose. Insulini haisi iyo mhinduro - inochengeta glucose pane imwe nzvimbo yepamusoro uye inoiisa iyo mumasasa. Chero mamiriro ose ezvinhu, inokonzera masero kudya iyo glucose, kwete mafuta, pamwe chete kuwedzera kuumbwa kwamafuta acids muropa.
Asi HGH kuva rudzi rwemupikisi we insulini, iri kuedza kuderedza kushandiswa kwesero glucose uye kumumanikidza kuti adye mafuta acids. Kuti uite izvi, inopindira mukati memumakumbo emafisi emafuta uye inoshanda sekutakura nzira inovatora kubva kumafuta ane acids, achivaunza muropa, uye inovapa oxygen. Mune mamwe mazwi, inoshandura nzira yekunyora, kureva kuderedza nhamba yemafuta emafuta. Uye zvinonyanya kukosha, hapana HGH mafuta masero haazomboregi zviri mukati uye asingazoparadzwi. Asi kana masero emuviri achange achida mamwe mafuta acids, uye kupera kwemasero emafuta pasi pekuita kwekukura kwehomoni kunowedzera, uye kuunganidza mafuta kubva pamabhadharo kuchawedzera, izvo zvichaita kuti ureruke. Kana iwe uchida chaizvo kupfupisa, muviri unongotanga kudya mafuta ayo. Uye nokuda kweizvi, kutanga uye mberi, unoda huwandu hwakakwana hwekukura kwehomoni.
Chikoro chekukura kwehomoni yekurema kuBangkok
Iko kune maitiro akawanda ekukura kwehomoni. Chimwe nechimwe chavo chinopindira pane zvinangwa zvakasiyana uye zvakanakisisa vasati vaudza ani zvake wavo kuti aone chiremba muThailand. Kana, zvichida, kuve nechokwadi kuti uremerwe uhu hauna matambudziko nehomoni yehomoni uye hormone dzepabonde, zvisinei kuti zvinotarisirwa zvinokonzerwa neHGH hazviratidzi.
Nzira yekare yeHGH yekurema nekureruka kwemisumbu inotanga nemakiromusi emasikirini e2 emishonga zuva rega rega. Kana vasingaratidzi migumisiro yechirwere (pasi), saka vhiki yechipiri unogona kuwedzera muyero kune zvikamu zve 5, asi hapana - nguva refu-mumuviri wematombo makuru ekukura kwehomoni inotungamirira kukuti pancreas mune Edza kuenzanisa nhamba yose yakakwana yakawanda ye insulini yakanyanyisa.
Cherechedza: Dzimwe nguva kunyange vakurudzirwa kuti vabatsire pancreas mune izvi nekuita mamwe majekiseni e insulin. Asi zvakakosha kuti zvirongwa zvive nekushandiswa kwekukura kwehomoni muhotera yepamusoro, kupfuura zvikamu zve 5 pazuva.
Kuti injove kukura kwehomoni apo mumuviri inoumba mamiriro ezvinhu akanaka kwazvo, kureva nekusuruvara kweropa. Iyo nguva nguva isati yasvika (nguva yakanaka pane musina chinhu mukati mambakwedza) uye munguva kana mushure mekushanda kwakasimba, apo shuga inopedzwa mukuita basa. Yakakurudzirwa kushandiswa kwemukati, kunyange zvazvo paive nemashoko akanaka pamusoro pekuiswa kweHGH intramuscularly. Kazhinji inorova mudumbu, iyo inobatsira kuratidza kupisa mafuta munzvimbo ino.
Mune nguva yekambani yekuwedzera mhizha yeHGH inoda kupinda muhurumende yekudzidzira mitambo, kunyanya kune simba, 2-3 dzimwe nguva pavhiki. Nguva nenguva kudzidziswa simba kunoda kudimbiswa aerobic. Kuti ubatsire kukura kwehomoni kunoshandura muviri mumufuta wemetabolism, unogona kupinda muzvinyoro zvokudya zvakasviba-carbohydrate. MuGeneral, kunyange zvazvo kune chirongwa chokuomerera kune avhareji yekoriyamu kudya (kureva kudya uye kupedza zvinenge zvakaenzana nemamorikori), kunyange magetsi ekugadzira magetsi nemafuta akawandisa anogona kuunza mafuta anoda kupisa.
Munguva yemutambo wekupera kurasikirwa kwepamusoro kunokurudzirwa kunwa nekumwe kurasikirwa kwekureruka - kukura hormone kunenge kusingapesane nemumwe wavo. Kunyatsonaka zvakanaka thyroid hormones, eg thyroxine (100-150 μg zuva nezuva) kana triiodothyronine (25 μg zuva nezuva). Havasi chete vanopisa zvinopisa ivo pachavo, asiwo zvinobatsira pane chirwere chetachiona. Uye mukati mekukura kwehomoni inofanirwa nayo - HGH inhibisa basa rayo uye inogona kutungamirira kuwedzera kwayo, kuitira kuti utachiona hwehomori panguva iyi huchabatsira kuderedza kuratidzika kwezvinogona kuitika migumisiro.
ECA uye clenbuterol mamiriro ekutanga ekukura kwehomoni inowedzerawo mafuta ako kupisa migumisiro, kunyange zvakadaro, inowedzera dambudziko remigumisiro yavo.
Zvimwe zvikamu zveHGH
Ichokwadi, HGH yakasikwa yemuviri wemunhu. Semuenzaniso, nezera, izwi rayo "pacha" muvanhu rakaderedzwa, kuitira kuti kudzorerwa kwekuwana HGH kubva kunze kunotarisa zvakashata zvisina kunaka, kunyanya kana zvisingabviri kuzvidzivirira pasina humoni mumuviri. Iyi ndiyo minda miviri yeHGH. Inowanzoenzaniswa ne-steroids (iyo yakafanana yakafanana, uye inoshandisa maererano nemapoka akafanana evanhu), asi haibatsiri pakugadzirwa kwemaromoni ezvepabonde, uye nekuda kwechimwe chiito chekuita kune migumisiro shoma shoma. Uyezve mushure mokunge maitiro ekukura kwehomoni haafaniri kutarisirwa kupera-cycle therapy, inotaura zvekuchengeteka kwake.
MuThailand kune nhema yokuti kushandiswa kwekukura kwehomoni yekurema kunokonzera kuwedzera kwenzeve, mhino, matama, rurimi, cartilage, mapfupa (ane maitiro akaipa mumatunhu emagungano), moyo Uye dzimwe nhengo dzomukati (mumuenzaniso wakapiwa "vadziviriri vomuviri" vane vadzidzisi vemitambo avo vakakurira miviri uye zvino vanoita sevari kuvhara mumimba). Zvose izvi zvinogona kuitika zvechokwadi, asi bedzi apo iwe unoshandisa chirwere ichi nemishonga yakawandisa yezvidimbu zvakataurwa. Shanduro imwechete HGH yekurema kurasikirwa yakafanana neyo.
Inonyanya kuitika pamagariro eHGH-carpal tunnel syndrome, inoratidzirwa nekushaya simba kwemakumbo. Asi iyo inobatanidza nekumanikidzwa kwemitsipa mukati mekunze kwakawedzera mishonga, saka chiyero chekuremerwa kwekurema hachina ngozi shoma yehutano.
Kukanganisa kwakaipa pane pancreas uye gland gland, sezvataurwa pamusoro apa. Prescription - insulin uye hormone ye thyroid, maererano. Mushure mekuregererwa kwekukura kwehomoni, basa regland rinodzoka.
Nharaunda yechirwere inokonzerwa nekuwedzera kwekumanikidza, izvo zvinogona kudzivirira kana kuderedza maitiro eHGH, kana mishonga inoderedza kuwedzera kweropa.
Ndekupi kwatenga kuwedzera hormone muThailand?
Kutenga kukura hormone ndiyo inonyanya kukoshesa dhigirii yake. Ichokwadi ndechekuti dieters yakawanda iri kutenga HGH kubva kune vatengesi "nemaoko" kana kuburikidza nemamwe mawebhusayithi asinganzwisisiki. Asi 75% yechirwere muThailand yakavhunika fake. Uye kunyange hupenyu chaihwo shamwari dzakatenga dzingasashanda nekuda kwekuti iyo yakanga isina kunyatsochengetwa - HGH inofanira kuramba iri mufiriji, inowedzera hupenyu hweshefu.
Imwe mhedziso ndeyekutenga hormone kukura chete mu chitoro chemishonga. Iyo mishonga inorambidzwa, asi chete yemitambo (doping). Tenga kukura kwehomoni yekureruka iwe unogona kuwana zviri pamutemo muBangkok. Mishonga inopupurirwa HGH ndiyo "Genotropin","Ansomone"uye" Jintropin "Zvose uye zvinowanzozivikanwa ne" top four "," blue Tops "uye" Norditropin "ndeye 100% fake. Uye kunyange paunotenga mishonga yemishonga inogamuchirwa iwe haufaniri kukanganwa kutarisa chidziviriro chekudzivirira pamapurasitiki Iyo inowanikwa nevanogadzirisa kurwisana nematengesi.